सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयन – Yug Aahwan Daily
सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयन
युग संवाददाता । १५ बैशाख २०७७, सोमबार ०७:५७ मा प्रकाशित
1944 पटक हेरिएको
कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । विशेषगरी प्रदेश सरकार गठन भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा यो समस्या धेरै देखियो । विगतमा विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयन नहुने धेरै कारणहरु थिए । त्यसमा पनि कर्मचारीको अभाव, संरचना नहुनु र कानुनी जटिलता मुख्य कारण थिए । यही कारण देखाएर प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो समस्या दोहोरिएको छ । अर्थात आर्थिक वर्ष सकिन अब मात्र साढे दुई महिना मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा मुश्किलले विकास तर्फको १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कोरोना त्रासका कारण यतिबेला लकडाउन छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माण ठप्प छ । यसकारण पनि अब बाँकी रहेको अवधिमा विकास बजेट खर्च हुने अवस्था देखिदैन । अर्थात विकास तर्फ बाँकी रहेको करिव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न समस्या देखिएको छ । कोरोनासँग जुधिरहेका बेला प्रदेश सरकारलाई विकास बजेट खर्च नहुने हो की भन्ने पीरलो पनि छ ।
विकास खर्च निराशाजनक भएपछि प्रदेश सरकारले लकडाउनको अवधिमा पनि मेसिनबाट काम हुने आयोजना संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कोरोना त्रास पूर्णरुपमा अन्त्य नहुँदासम्म विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी हुने अवस्था छैन । सहज अवस्थामा समेत यस्ता आयोजनाको काम अपेक्षा अनुसार नहुने अवस्थामा लकडाउनमा तीव्र गतिमा काम हुनेमा आशंका नै छ । यद्यपी सरकारको इच्छाशक्ति भएमा विकास आयोजनाको काम हुन पनि सक्छ । तर अब आर्थिक वर्ष सकिन कम मात्र समय छ । बजेट खर्च नहुने विगतकै समस्या दोहोरिने अवस्था आएपछि कर्णाली प्रदेशका सांसदले भने अब विकास बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताएका छन् । सामान्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने कर्णालीका नागरिकका लागि स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा लगानी हुनु त सुखद् पक्ष हो । तर सांसदहरुले भनेजस्तै के सरकारले खर्च हुन नसक्ने बजेट स्वास्थ्यमा लगानी गर्ला ? यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यतिबेला कोरोनाको त्रास छ । आज विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छ । कर्णालीमा हिजोआज मात्र होइन, विगतमा पनि विभिन्न महामारी भोगेको छ कर्णालीले । दुर्गममा आज पनि सिटामोल नपाउने अवस्था छ । गाउँमा स्वास्थ्य संस्था र डाक्टर नहुँदा गर्भवती र सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । अहिले पनि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र संरचना नहुँदा सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि कर्णालीबासी बाहिर जानुपर्ने बाध्य छ । विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भयो भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो । तर यसपाली सरकारलाई अवसर पनि छ । किनकी विकास आयोजनाहरु संचालन नभएर बजेट खर्च नुहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा त्यो बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, उपकरण र औषधिमा लगानी गर्ने की ? यसमा सरकारले सोच्ने बेला आएको छ । (युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक, सुर्खेतमा २०७७ बैशाख १५ गते प्रकाशित)